Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:31 Aucun commentaire:
JESOSY KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA SY TOMPON’ NY TOMPO ETO MADAGASIKARA:
FIOMBANAMBEN’ NY ZANAKANDRIANA SY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA:
JESOSY KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA
SY TOMPON’ NY TOMPO ETO MADAGASIKARA:
1) Ny Fiombanamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, tarihan’ ny Filoha Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, dia nanao Fivoriambe ny Alahady 17 Marsa 2013, ary notohizana ny 22 Marsa, 26 Marsa, ary ny 06 Aprily 2013 teto Antananarivo. Tonga nanatrika izany fivoriana izany ny solontena eni-polo mahery no sady sangany, avy amin’ ny lafy valon’ ny Nosy (Imerina Eni-Toko, Bezanozano, Antambahoaka, Antemoro, Antanosy, Betsileo, Sakalava-Menabe, Sakalava-Analalava, Bara, Tanala,… sns).
2) Ara-tantara dia notsahivina fa Taranak’Abrahama, Isaka ary Jakoba, Taranak’Israely, daholo ny Ampanjaka sy Zanakandriana manerana ny Nosy, ary efa samy namoaka izany tantara miafina izany ny isam-poko. Ary notsahivina ihany koa fa taranaka voafidy ary nataon' Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, ho "Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina" (Eksodosy 19:6) eo anatrehany.
3) Ary nohamafisina fa efa nisy hatry ny ela, ary mihoatra ny 3.000 taona mahery, ny rohim-pihavanana eo amin’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana rehetra manerana ny Nosy. Notsahivina ihany koa fa ny razamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, manerana ny Nosy, no nitondra ireo Fanaka Masina sarobidy tao amin’ ny Tabernakely tao Sinai sy ny Tempoly Voalohany tao Jerosalema, indrindra ny Fiara Fanekan’ i IHWH misy ny Didy Folo nosoratany tamin' ny tànany sy ireo Fanaka Sarobidy Volemena, taorin’ ny Taona 587 talohan’ i Jesosy Kristy, avy any Israely nankaty Madagasikara izay Tany Edena fahiny, Ilay Lahimatoan’ ny Tany.
4) Tamin’ ireo fivoriana ireo dia tsapa fa marobe ny zavatra tsara vitan’ ny Mpanjaka sy ny Zanakandriana ary ny Ampanjaka teto Madagasikara, nandritra ny taon-jato maro: Ny Famoriana ny foko niady nanerana ny Nosy, nanambatra izany ka lasa fanjakana iray; ny Fampidirana ny Fampianarana an-tsoratra; ny Fampandrosoana ny firenena amin' ny lafiny maro ka nahatonga ny Fanjakan’i Madagasikara ho anisan’ ny fanjakana lehibe indrindra manerana ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika; ny Fiarovana ny tanindrazana ary ny Fitandrovana ny fiandrianam-pirenena.
Nisy koa anefa ireo ota-fady sy zavatra ratsy nataon’ ny mpitondra sasany, ny olona sasany tao amin'ny foko ary ny zana-poko samihafa teto Madagasikara tany aloha. Miampy trotraka amin’izany ny disadisa sy ny fahalovana ary ny olana politika goavana vokatry ny ataon' ny mpanao politika, misy ankehitriny.
5) Koa nibebaka sy nifona tamin’ IHWH, Iray Masin'Israely, Andriamanitra Andriananahary, ny Fiombanamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, ary nangataka ny ràn’ i Jesosy Kristy Tompo mba hanadio ny fahotan’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana manerana an’ i Madagasikara, araka ny Tenin’Andriamanitra manao hoe: “Ny ràn’ i Jesosy Zanany no manadio antsika amin’ ny ota rehetra” (I Jaona 1:7).
Manaraka izany dia nanapa-kevitra izy ireo, teo anatrehan’IHWH, Iray Masin'Israely, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, fa hanamafy ny fifankatiavana, ny firaisankina sy ny fifanampiana ary ny fifanohanana hatrany, ary hanamafy ny Fahamarina sy Fahamasinana.
Ary mitaona ny vahoaka Malagasy rehetra hibebaka, hiala amin' ny ratsy fanao, ary hanao izany koa, araka ny Baikon’IHWH, Iray Masin'Israely, satria “IHWH dia Fitiavana, Marina ary Masina”. Hoy ny Tenin'IHWH: "Fa toy izao no nitiavan'IHWH izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana (Iahosoa Masina na Jesosy Kristy), mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hànana Fiainana mandrakizay" (Jaona 3:16). Dia hoy Jesosy Kristy : "Izaho no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana. Tsy misy mankany amin' ny Ray afa-tsy amin' ny alàlako" (Jaona 14:6). Ary koa "Izaho no IHWH Andriamanitrareo. Manamasina ny tenanareo, ka dia ho masina ianareo satria Masina Aho" (Levitikosy 11:44).
6) Ary manoloana ny olana politika sy toekarena ary ara-piaraha-monina, izay mianjady mafy eto amin’ ny firenena, indrindra ny fijaliana sy ny fahantrana mihamafy sy mitombo hatrany, izay mahazo ny enina ambi-valopolo (92%) isan-jato maherin’ ny Malagasy, dia nanamafy ny Fiombonamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara fa :
7) tsy afaka ny hipetraka na hitaza-potsiny, ary tonga ny fotoana handraisana ny andraikitra sy adidy masina, izay napetrak’Andriamanitra amin’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, ho famonjena sy fampandrosoana ny firenena, araka ny Tenin’IHWH, Iray Masin'Israely, tsy miova omaly anio ary mandrakizay, manao hoe:
"SAMBATRA IZAY FIRENENA MANANA AN'IHWH HO ANDRIAMANINY" (Salamo 119:105).
"SAMBATRA IANAO RY FIRENENA, RAHA TENA ANDRIANA NO MPANJAKANAO" (Mpitoriteny 10:17).
"“NY MPANJAKA LAHY MANJAKA ARAKA NY FAHAMARINANA ARY IREO ZANAKANDRIANA MITONDRA ARAKA NY RARINY (Isaiah 32:1).
Izay no Sitrapon’Andriamanitra hitondra Fitahina ho an’ ny firenena rehetra. Ozona kosa ho an’ izay firenena mitsipaka izany Tenin’Andriamanitra izany.
Farany, nahatsapa koa ny Fiombanamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara fa ady amin’ ny Satana sy ny fanahy ratsy eny amin’ ny rivotra no atao, izay mampiady ny Malagasy sy misakana ny fampandrosoana eto amin’ ny firenena, fa tsy ady amin’ny olombelona. Koa tsy misy afa-tsy ny manaiky sy miaraka ary mankatoa amin’ i Jesosy Kristy, Andriamanitra tonga nofo, irery ihany no vaha-olana amin’izany. Ny fifikirana amin’ i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, irery ihany no fandresena ho antsika!
Koa nanamafy indray ny Fiombonamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana fa Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra Velona avy any Nazareta, no Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo eto Madagasikara (I Timoty 6:15)!
"MITSANGANA, MIHAZAVA, FA TONGA NY FAHAZAVANAO, ARY NY VONINAHITR'IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1-2).
Ho an’Andriamanitra Andriananahary irery ihany ny Voninahitra,
ao amin’ i Jesosy Kristy Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ ny tompo!
Antananarivo, Vohitra Masina, faha-17 Marsa 2013.
Prince. Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan’ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 09:34 Aucun commentaire:
FANJAKAN’ I MADAGASIKARA: FANJAKAM-PISORONA SY FIRENENA MASINA:
1- Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, amin’ ny maha-Filohan’ny Fihaonamben’ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara anao dia ahoana ny fahitanao ny fahaleovantenan’ i Madagasikara ?
Amin’ ny maha-Filohan’ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, avy amin' ny Lahimatoan’ ny Fianakavian’ ny Mpanjaka eto Madagasikara anay, dia tiako ny manamafy fa efa nahaleotena i Madagasikara nandritra ny Telo arivo taona, nanomboka tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Solomona (970-931 taona talohan’ i J.K) raha kely indrindra ka hatramin’ ny 1896. Ary ny Fanjakan’ i Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra teto amin’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika, ary efa lasa lavitra amin’ ny lafiny maro noho i Japana talohan’ nanjakan’ ny Emporora Meiji tamin’ ny taona 1868.
Ny Fihaonandehibe tany Berlin (1883-1885) ho fizarana an’ i Afrika sy Madagasikara no nanova ny politika iraisam-pirenena. Ankehitriny, ny zanatany frantsay taloha dia mbola ao anaty fanjanahantany vaovao, amin' ny endriny repoblikana, laika, demokratika, izay mifanohitra amin' ny Tenin'Andriamanitra, narafitr' ilay frantsay Jacques Foccart, ary naparitaka manerana an' i Afrika sy Madagasikara tamin' ny alàlan' ny tambazotra Fransafrika.
2- Ahoana no fahitanao ny fitondrana ny firenena nandritra izay dimam-polo farany izay ?
Ireo mpitondra repoblikana sy ireo governemanta nifanesy, nanomboka tamin’ ny taona 1960 ka mandraka ankehitriny, dia tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena. Indrindra koa fa tsy nisy niomana tamin’ izany. Taorian’ ny 52 taona nisian’ ny rafitra repoblikana sy tezamita (1960-2012) dia tafiditra ao anatin’ ny firenena 40 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara (Indice de Développement Humain très faible, IDH, PNUD, 2011), ary vao maika miharatsy aza izany amin’ ity taona 2012 ity, satria mihaotra ny fito amby fito-polo isan-jato (+77 %) ny mponina no tena mahantra ary miaina amin’ ny fidiram-bola latsaky ny 1 Dollar USD isan’andro.
3- Ahoana ny fahitanao ny fianam-pirenena ankehitriny raha oharina tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny?
Tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny dia nisy ny Fanajàna an’Andriamanitra Andriananahary ary ny fanajàna ny soatoavina sy ny kolotsaina. Nisy ny fanajàna ny mpitondra sy ny fifanajàna, nisy ny tena fandraisan’andraikitra, ny fitadiavana sy ny fikatsahana ny tsara sy ny raitra ary ny tonga lafatra. Tena nisy koa ny fitsinjovana ny tombontsoan’ ny firenena sy ny tombontsoan’ ny vahoaka, fa tsy ny tombontsoan’ ny mpitondra irery ihany sahala amin’ ny ankehitriny.
- Teo amin’ ny lafiny fandriam-pahalemana, nisy kokoa izany satria nisy tafika manaraka baiko sy maro an’isa ary tsara hofana, ary indrindra koa noho ny firaisankinan’ ny fokonolona miaro ny vohitra, indrindra tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) ka hatramin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 (1828-1861). Ny Mpanjaka Andrianampoinimerina dia namorona ny Akademia Miaramila voalohany, izay nanofànana ny miaramila tao Antsahafilo-Avaradrano. Ary ny Tafika tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 dia naharesy ireo tafika frantsay sy tafika anglisy nanafika teto Madagasikara.
- Teo amin’ ny lafiny fampianarana, nisy fampianarana avo lenta miaraka amin’ ny taranja mafonja izay nisy votoatiny lalina teto Madagasikara. Ny zaza dia tsy maintsy nandeha nianatra ary ny fampianarana dia tsara. Ny mpampianatra dia tsara hofana. Nisy ny fandrosoana ara-kalitao sy ny fitomboan' ny isan' ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary ambaratonga ambony. Ny Fianarana Ambony dia tena avo lenta tokoa. Tamin’ ny taona 1896, izany hoe tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona III, dia nisy mpianatra 200.000 tao anatin’ ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary sekoly kristiana no betsaka tamin’izany. Ary Madagasikara no anisan’ ny firenena nànana mpianatra betsaka indrindra eran-tany.
- Teo amin’ ny lafiny ara-piaraha-monina, nisy ny fihavanana sy ny firaisankina isam-bohitra ary ny fitsinjovana sy ny fikatsahana ny tsara ho an’ ny mponina. Nisy fitsinjovana ny marary tamin’ ny fanangànana Sekoly Ambony Fianarana Dokotera Mpitabo tao Ankadinandriana sy fanangànana ny Hopitalin’ Isoavinandriana izay nanara-penitra ary niaraka tamin’ ny dokotera mpitsabo tsara hofana.
- Teo amin’ ny lafiny vola sy toekarena, ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) dia nahavita nanangona tahirim-bola mba ho fampandehanana ny fanjakana mandritra ny zato taona manaraka azy, tao amin’ ny Lapam-panjakana tao Ambohimanga. Ary natomboka ny famoronana orinasa majinika sy ny orinasa vaventy tamin’ ny alàlanan’ ny famadihana ny akora ho vokatra entina hampandrosoana ny indostria (cf. Ranavalona I izay nampian’ i Jean Laborde tany Mantasoa).
- Teo amin’ ny lafiny tontolo iainana, tena nisy ny fanajàna sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitsinjovana ny harena voajanahary (izay tena mifanohitra amin’ ny fanapotehina ny zava-maniry sarobidy sy ny fandripahana ny biby sarobidy ary ny tontolo iainana ankehitriny, toy ny fanondrànana antsokosoko ny hazomena milanja 52.000 taonina mahery..).
- Teo amin’ ny lafiny ara-sakafo, dia nihinan-kanina tsara any ankamaroan’ ny Malagasy fa tsy maty noana na tsy ampy sakafo sahala amin’ ny ankehitriny. Noho izany, nanana fari-piainana ambony kokoa noho ny ankehitriny ny mponina tamin’ izany.
- Teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena, Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra manerana an’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika. Tsy izany intsony no zava-misy amin’ izao fotoana izao.
Fehiny, amin’ izao rafitra fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao izao, dia ilay rafitra repoblikana, laika, demokratika, ny mpanao politika dia samy tia ho lohany avokoa, tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany manokana ny ankamaroany, ary tsy misy manaiky ho tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana. Noho izany dia tena gaboraraka sy lasa fanjakan’ i Baroa ny fitantànana ny firenena.
4 – Ahoana ny hevitry ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana syAmpanjaka eto Madagasikara manoloana ny olana misy ankehitriny eto amin’ ny firenena?
Talohan’ ny nahatongavan’ ny Asiatika, ny Afrikana sy ny Arabo ary ny Eoropeana teto Madagasikara, ny Mpanjaka sady Mpisorona Andriantomara, razamben’ ny Andriamanjaka teto Imerina sy teto Madagasikara, izay niaina efa ela be aman-jato taona talohan’ i Jesosy Kristy, dia nilaza hoe: "Ry Zanakandriana, zanako lahy, tsofiko rano ho anareo ity Nosy ity, ary mitsodrano anareo aho hanjaka sy hitondra eto amin’ ity Nosy Madagasikara ity”. Koa fitahiana ho an’ izay manaja sy manaraka izany, ary ozona kosa ho an’ izay rehetra mitsipaka sy tsy manaja izany hafatra izany.
Ary taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny mpitondra repoblikana, izay betsaka fahalovana, tsy nahay mitondra, betsaka mpangalatra, mamono vahoaka, mamadika tanindrazana, mivarotra tanindrazana, ka nahatonga ny fahaverezan’ny vola miditra ho an’ ny fanjakana mihoatra ny 100 Lavitrisa Dollar USD, izany hoe mihoatra ny 200.000 Lavitrisa Ariary, nanomboka tamin’ ny 1960 ka hatramin’ ny 2012, dia manana adidy mavesatra ny Andriana, eo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, mba hanjaka sy hitondra ary hanavotra an’ i Madagasikara sy ny firenena manontolo.
Noho izany, nanomboka tamin’ ny taona 2010, ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, dia miasa am-pilaminana amin’ ny fampijoroana ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina, izay ho hajoron’Andriamanitra ary ho hita mazava tsy ho ela intsony eto amin’ ny firenena, miaraka amin’ ny Lalàm-Panorenana Vaovao miainga sy mifototra amin’ ny Baiboly Tenin’Andriamanitra, ho Famonjena sy ho Fanavotana ary mba hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:02 Aucun commentaire: